Ugu ukubhukuda emanzini usawoti ukuphulukiswa - iyona izizathu zokuthi kungani izivakashi eziningi zithanda ukuvakashela olwandle. Ukuze abakhuluma isi-Russian eCrimea kuyinto endaweni ethandwa. Futhi akumangalisi, ngoba kukhona amabhishi ahlanzekile, amanani aphansi futhi abantu abanobungane. Konke lokhu has a izivakashi ajabule nokusiza ukuletha emuva futhi.
Ngo eCrimea zikhona amabhishi ezahlukene - lokhu ezitshekile olunesihlabathi kulabo abasebenza iholide nithule, emaweni amabhishi enamadwala for bamazwe, amatshe ngezinyawo yezokwelapha, nokunye okuningi.
amabhishi zokwelapha sandy
Marine emangalisayo sandy beach kufanelekile hhayi kuphela sokuzilibazisa, kodwa futhi ukwenza umuthi, akusilo ize eCrimea kukhona inqwaba zokungcebeleka, okuyinto njalo ehlobo evakashela izinkulungwane zabantu. Kufanele kube okungenani izinsuku ezingu-5 ukuya olwandle, ngemva eyigeza ukuthatha isihlabathi "okugeza", badle izithelo organic nemifino - nabantu ngokushesha uzizwe kangcono izikhathi ezimbalwa.
Ukuze uphumule ebhishi sandy kufanele ukuya ogwini olusenyakatho Peninsula YaseCrimea kusuka May kuya ku-October, namanje ukuvula isizini ukubhukuda. Beach ukufuthelana esenziwa yilanga, ngenkathi has a izinhlayiya lime neziqhumane efile. Ngenxa izimfanelo zayo eziyingqayizivele kwenzeka ukuphendula kancane ane-alikhali, okuyinto ke baxhumana abantu nokukhululwa-carbon dioxide. Le nqubo usebenza kahle futhi inikeza ezishisayo, amakhemikhali nemiphumela mechanical emzimbeni.
Ngenjongo isimilo engcono ukuya Saki futhi Yevpatoria. Sand Ukwelashwa kungenziwa olwenziwe izifo zesikhumba, iphaphu (non-TB), isimiso sezinzwa, uhlelo zemisipha.
Lolwandle ne amatshe
Uma ufuna ukuthola eCrimea ebhishi amatshe, kungcono ukuba baphumule e Yalta. Abantu abaningi bakhetha abalale shingle, uhambe kuwo engafaké zicathulo. Kuyinto nge amatshe unethuba ukubona futhi ukuzwa lolwandle ongenakulibaleka. Sea ogwini nge amatshana amancane ukubhucungwa imilenze, kuvusa kwegazi, uhlelo lymph iqala. Umuntu ukuphefumula kulula, futhi izibilini baqale basebenze ngokuzikhandla.
Kungcono ukuba bafeze massage izingane kanye nabantu kakhulu eminyakeni yokuguga. Izingane uthole i zokuvimbela omuhle kakhulu izinyawo flat, kuyilapho abantu abadala benza igazi lami hambisa ngokushesha.
Kuleli lolwandle, qiniseka ukuletha namatshe ambalwa oyindilinga, okuyinto ungenza massage ngasiphi isikhathi sonyaka.
Nakuba abadala ithunyelwa kolwandle ukuba aqambe amanga elangeni, uphumule futhi ngezinye izikhathi athathe cwilisa emanzini afudumele abanye, izingane lihamba, badinga ukwenza okuthile nge amandla abo, futhi le njongo ezokwenza ivumelane lolwandle. ECrimea ilungele ejabulela ebhishi, ngoba lokhu ukukhetha yasemadolobheni lapho kukhona isihlabathi.
Ethandwa kakhulu game - ukwakhiwa isihlabathi nezigodlo. Izingane ukudlala futhi bancintisane, kuyilapho kubantu abadala kungasiza ingane yabo bese nijabula ndawonye. Futhi lolwandle ngokuvamile buhle igridi for beach volleyball, izingane ezindala bayokujabulela ukuba ujoyine iqembu elithile. Kukhona emidlalweni eminingi yamanzi, njengemifula isikebhe, uhambo ku yacht, jet eqhweni futhi 'banana'.
Kulezi uhambo kuyoba mnandi kakhulu izingane nabazali bazo, uma abadala uzokutshela izindaba ezithakazelisayo endaweni, okuyizinto mayelana yezimila nezilwane ezihlukahlukene, legends ehlukahlukene mayelana zasolwandle.
Ogwini engcono isihlabathi
Kukhethwa senziwa esivuna a beach sandy? Khona-ke kufanele uvakashele okungcono izindawo lapho kukhona isihlabathi ahlanzekile, ulwandle ecacile efudumele futhi izimo ezikahle ukuze bathole ukuphumula. Izindawo ezaziwa kakhulu yilezi: Storm, Olenevka, ukuthula, Saki, Yevpatoria, Novo-Fedorovka, Popovka, Mezhvodnoe. Futhi, abantwana kufanele uvakashele emabhishi Gulf Kalamitsky, ngoba kukhona ukujula kancane futhi amanzi lifudumeza up ngokushesha.
Bamazwe bakhethe Olenevka futhi Mezhvodnoe, ngoba kukhona uya inqwaba izivakashi namatende ukuthi bekwi-kite ezindizayo futhi windsurfing.
Lolwandle ukuvakashelwa zonke izinhlobo zabantu ngenjongo kobhukuda ezinhle futhi ukuthamela ilanga. Abantu abaningi bethamele ilanga e bikinis futhi abakhululiwe - enqunu ebhishi nudist. Lezi emabhishi aziwona, ngaphandle kokungabaza, kunezimo zabo kanye nebubi, nezwe eziningi kubo, eCrimea iyathinteka.
Ogwini ethandwa kakhulu emhlabeni zitholakala abantu abalisebenzisayo eziQhingini zaseCanary, ngoba uLwandle LwaseCaribbean, ku le-Cote d'Azuri futhi emikhawulweni USA. Ngo eCrimea, izindawo ethandwa kubhekwe Koktebel, Ordzhonikidze, Sudak futhi Novy Svet, Lyubimovka, Foros, amatshe okwesibhakabhaka. Kukhona nezinye izindawo, kodwa baziwa kuphela kulabo abanesithakazelo kule nje uhlobo lokuzijabulisa.
Kukhona amabhishi ahlukahlukene nudists. Kwezinye abesifazane angaya topless, kwezinye izindawo kungenzeka ukuthi bakhumule babe nqunu, futhi kukhona amabhishi okuxubile lapho wonke umuntu yamaSamariya njengoba efuna.
Izinzuzo zalezi amabhishi:
ukwenqatshwa kwenkolelo engaguqukiyo;
akukho emzimbeni Swimsuit ezimanzi, okuletha ukungakhululeki.
musa batusa eneka umthondo wadalula ekukhanyeni ultraviolet;
Ngeshwa, ngo-isimo somnotho samanje, hhayi wonke umuntu ithuba ukuvakashela lolwandle. Izithombe ingabonwa nsukuzonke, ngisho ukubeka sibuko kukhompyutha, kodwa abasoze esikhundleni iholidi yangempela, ukuthi umoya ezikhethekile okuyinto wazizwa emnyango edolobheni elisogwini. Ngithanda ukuveza ithemba lokuthi ukuthuthukiswa kwezokuvakasha eRussia enze kube nokwenzeka ukuba iholide olwandle ethengekayo.
Ukushintsha yabalindi ngesikhathi Red Square: incazelo, isiko, ipulani bese amaqiniso athakazelisayo
Indlela ukuya e-Australia ngenxa yokuhlala unomphela
Ezibiyele Isigodlo congresses. Patrimony
Lonke iqiniso eliphathelene kwamakha yasekhaya "Sperm" ikhethelo "iNeva izimonyo"
"Genius Old": Ukubuyekezwa idayari yomfundi
"Lokoid" (ukhilimu izingane): ukubuyekezwa kanye analogue. Cream "Lokoid": intengo, ukubuyekezwa, imiyalelo